Al-Shabaab oo nolosha shacabka Ceelwaaq ciriiri galisay
Deegaanno hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobalka Gedo ayaa lagu soo warramayaa in kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab ay si khasab ah ugu tababbarayaan carruur da’ yar kuwaasoo waaliddiintooda si khasab ah ururku uga soo watay.
Waxaa sidoo kale dadweynaha ku nool deegaannadaas ay sheegeen in ururkaas diinta ka been sheegay ay xoolaleyda ka dhacayaan xoolahooda halka kuwa ganacsatada ah ay lacago baad ah ay si joogta ah uga uruuriyaan. Arrintaan, oo aan aheyn mid ku cusub goobaha ay al-Shabaab ka arrimiyaan, ayaa sababtay in dadweynaha ay soo wajahdo xaalad nololeed oo aad u liidata.
Mid ka mid ah saraakiisha dowladda ee degmada Ceelwaaq ayaa warbaahinta u sheegay in ururka dilaaga ah ee al-Shabaab uu dhibaato weyn ku hayo xoola-dhaqatada iyadoo uu sheegay in ururkaas uu si cad uga dhaco xoolahooda, carruurtoodana si khasab ah u askareeyo.
“Dhaqdhaqaaqyada ganacsi ayaa aad u yaraadeen waayahan dambe, dadka shacabka ahna aad iyo aad ayey u dhibaateysan yihiin. Xoolihii u soo baxaanna nimankaan dad qalatada ah ayaa duurka ugu jiraan oo xoolihii dhammaan wey iska qaadanayaan. Carruurtiina iyagoo yar yar ayaa la afduubayaa ama xoog loo kaxeysanayaa, marka dhibaato weyn baa halkaa ka taagan,” ayuu yiri sarkaalka.
Kooxda argagixisada ah ee al-Shabaab dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed kuma eka oo kaliya xasuuqa, balse waxay caqabad wayn ku tahay wax soosaarka dalka, taas oo si toos ah u waxyeelaynaysa nolosha.
Kooxda al-Shabaab waxay had iyo jeerba xiraan qaar ka mid ah waddooyinkii ay beeralayda iyo xoola dhaqatadu marsiisan lahaayeen badeecooyinkooda, iyadoo ka qaadaan baad xad-dhaaf ah taas oo nolosha ka dhigtay mid dhib ku ah dadka kuna khasabta beeraleyda iyo xoolalayda in ay awoodi waayaan in ay tacbadaan beeraha ama dhaqdaan xoolaha.
Ciidamo lagu tababbaray Turkiga oo qalin jebiyeen
Dowladda Turkiga ayaa waxay dhawaan tababbar u soo xirtay boqollaal askari oo Soomaali ah, kuwaa oo ku biiraya Ciidanka Xoogga Dalka ee dagaalka kula jira maleeshiyada ururka al-Shabaab.
Askartan ayaa waxaa tababarka loogu soo xiray Xarunta Taliska Ciidamada Turkiga ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho (Turksom), ka dib markii tababbar uu heerkiisu sareeyo ay ku soo qaateen dalka Turkiga.
Ciidamadan oo kumaandoos ah ayaa waxaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan dagaalka ururka al-Shabaab looga xoreynayo qaybo ka mid ah gobollada koonfurta & bartamaha Soomaaliya.
Munaasabad ballaaran oo ciidamadan loogu wareejinayay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay xerada Turksom, waxaana ka soo qayb galay mas’uuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed (Amar Dambe), Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage iyo Taliyaha Hawlgalka Ciidamada Turkiga, General Varmeyez.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxaa uu dowladda Turkiga kaga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay siiso Soomaaliya, isagoo ugu baaqay askarta qalin jabisay in waajib uu saaran yahay inay difaacaan shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa idin sugayaa ummadda Soomaaliyeed waxaad u tihiin miro ay beerteen oo ay sugayaan inay gurtaan. Qof kastoo Soomaali ah wuxuu rajeynayaa inaad goobta uu ku sugan yahay inaad tagtaan, wuxuu rajeynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad iyagoo taas sabab uga dhigaya inaad tihiin ilaaliyaashooda,” ayuu yiri taliyuhu.
Dhagarqabeyaal dil u geystay askari oo gacanta lagu dhigay
Ciidanka boliiska Soomaaliyeed iyo maamulka degmada Wadajir oo kaashanaya dadweynaha ku dhaqan degmadaaas ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan labo dhagarqabeyaal oo ka tirsan ururka dilaaga ah ee al-Shabaab kuwaasoo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka amniga degmada.
Saraakiisha amniga iyo maamulka degmada ayaa saldhigga booliska ee degmada Wadajir ku soo bandhigay labadaan dhagarqabayaal ee ka tirsan al-Shabaaab kuwaasoo isu dayay in ay baxsadaan, hasa ahaatee ciidanka amniga ayaa ku guuleystay in ay mid dhaawacaan midna ay gacanta ku dhigaan.
Ku simaha guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna guddoomiye ku xigeenka maamulka gobalka Banaadir mudane Ibraahim Cumar Mahadale ayaa goobtaas ugu mahad celiyay maamulka degmada iyo saraakiisha amniga howlgalkan ay ku guuleysteen.
“Cali Cabdullaahi wuxuu ahaa askari Soomaaliyeed, dalkiisa difaacaya, waajibkiisa gudanaya, runtii gacan ka xaq-daran ayaa dishay. Diinta sidey sheegtayna jannuu galayaa, kuwaanna cadaab ayey galayaan. Sababtoo ah nin aan aabbihiis dilin, xoola ka qabin, dhiiggiisa galin ayey banneysteen inay dileen. Adduunka cadaab ayay la kulmayaan, aakhirana cadaab ayay la kulmayaan.
Dadka degmada waxay xaq u leeyihiin inay nabad ku seexdaan, nabad ku soo kacaan,” ayuu yiri mudane Ibraahin Cumar Mahadale.
Wuxuu intaasi ku daray in ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay inaan iskaashadaan iyo in ay ka guuleysan karaan 40 carruur oo la marin habaabiyay oo ayna iska celin karaan haddii ay xog u soo gudbiyaan ciidammada amniga.